Rugby U20 – «Trophy Barthès 2019»: resin’ny Makis de Madagascar ny Maraokanina | NewsMada
Rugby U20 – «Trophy Barthès 2019»: resin’ny Makis de Madagascar ny Maraokanina
Tsara fanombohana ny Makis de Madagscar, sokajy U20, teo amin’ny fiadiana ny amboara “Trophy Barthès 2019”. Resin’ny Malagasy, teo amin’ny lalao manasa-dalana mantsy, ny Maraokanina.
Nomontsanin’ny Makis de Madagascar, tamin’ny isa mavesatra, 51 no ho 0 i Maraoka, teo amin’ny lalao manasa-dalana, hiadiana ny “Trophy Barthès 2019”, taranja rugby, ho an’ny sokajy U20. Fihaonana, notanterahina, omaly alarobia, tao amin’ny kianja Prince Edward School, Zimbaboe.
Azo lazaina fa nataon’ny Malagasy, tsy nisotro rano mihitsy ny Maraokanina, tamin’ity. Nanjakan’ny Makis tanteraka mantsy ny fihaonana. Porofon’izany, nisaraka tamin’ny isa, 18 no ho 0 ny roa tonta, teo amin’ny fizaram-potoana voalohany. Nahatonga, baolina nentin-tanana telo, ny Makis, tamin’izany ka ny roa voatsara ary ny iray kosa tsy voatsara. Mbola nisy ihany koa ny “hors jeu”, matin’ny Malagasy.
Nanantombo teo amin’ny haben’ny vatana ny Maraokanina, saingy hain’ny Malagasy ny niala tamin’izany. Nampiasa, ny hafainganana sy ny tolotolotra haingam-pandeha, tao anaty “trois quart”, ny Makis, izay tsy arakin’ny Maraokanina, mihitsy, ka nahatonga ireo baolina netin-tanana.
Tsy nanova ny paikadiny ny Makis de Madagascar, teo amin’ny fizaram-potoana faharoa, fa vao mainka nanindry. Nitohy araka izany, ny baolina nentin-tanana. Tetsy an-kilany, sahirana ny Maraokanina, tamin’ny tanjaky ny mpilalao malagasy.
Hidona, amin’i Zimbaboe, mpampiantrano, eo amin’ny famaranana, amin’ity “Trophy Barthès” ity, ny Makis de Madagascar. Ny Zimbaboeanina, izay nandavo ny Elefantan’i Côte d’Ivoire, tamin’ny isa, 26 no ho 10, teo amin’ny ankatoky ny famaranana, ilany. Ry zareo, Ivoarianina anefa no nitarika tamin’ny isa, 10 no ho 6, teo am-pialan-tsasatra.
Hotanterahina, ny asabotsy ho avy izao, ny famaranana eo amin’ny Makis sy i Zimbaboe.